Restaurant Week In Netherlands The | Save A tareenka
Home > safarka Europe > Restaurant Week In Netherlands The
Waqtiga Akhriska: 3 daqiiqo(Last Updated On: 02/06/2020)
Haddii aad la qorsheynayo safar si Amsterdam laakiin weli gartaan waqtiga ugu wanaagsan si ay u tagaan, laga yaabaa in aad rabto in aad ka fiirsan booqasho inta lagu guda jiro Restaurant Week 2019 Netherlands.
Restaurant Week waa dhacdo, Kuliyadda in qaadataa meel sanad walba adduunka oo dhan in 35 magaalooyinka waaweyn sida Amsterdam, New York, iyo Hong Kong. Restaurant Isbuuca ugu horeeya ee ka dhacay New York; abuuray by Tim Zagat, aasaasaha Zagat Survey, iyo Joe Baum, restaurateur ixtiraamo.
todobaadka waxa uu ahaa sidaas guulaystay in ay ku baahsan magaalooyinka kale ee adduunka oo dhan. Taariikhaha Restaurant Week kala duwan oo magaalo ilaa magaalo; si kastaba ha ahaatee, fikradda caadi ahaan waa isku mid ee guud ahaan goobaha oo dhan. makhaayadood ka qayb kor toddobaadkii bixiya qado iyo casho gaar at qiimaha jiidasho leh.
Haddii aad jeclahay cuntada oo aad miisaaniyada waa kooban, Restaurant Week aad bixisaa fursad si ay uga casheeyaan makhaayadaha sare ee Amsterdam qiimo dhimis. Midhadh fursad ay ku cunaan at the fiican Le Garage, La Brasserie ku Camelia at Okura Hotel, ama Brasserie ee Hotel Amstel ee ka yar!
Qaybta ugu wanaagsan waa in Restaurant Week Qaranka dhacdaa Amsterdam laba jeer sannadkii, guga oo mar kale dayrta. Laba jeer sannadkii, maqaayado oo dhan The Netherlands leeyihiin dhacdooyinka muddo todobaad ah halkaas oo aad ku raaxaysan karaan cunto koorso buuxda jajab ah waxa ay sida caadiga ah ku kici lahaa. Ku raaxayso casho 3-koorso kaliya 28,50 €!
qiyaastii 135 maqaayado oo dhan Amsterdam ka qayb taas oo ka dhigaysa in aad doorato gooynayaa. Munaasabadan ayaa waxaa labadii sanaba mar ay higsaneysaa in ay fududeeyaan waayo-aragnimo ah. Cuna oo Caba at Amsterdam fiicnaa goobaha cuntada by sampling bedeley ay qiimo go'an. Waxaa jira waqti ma kuu wanaagsan inaad u dhadhamiyaan suxuunta saxiixa makhaayad in aad si kale ku bixin lahaa qiimaha buuxa ee lagu jiro wakhti kasta oo kale oo sanadka.
Laakiin ka hor inta aad u faraxsan, fiira gaar ah in aad ku socon karo oo kaliya galay makhaayadaha iyo filayaan in la fadhiya. Boos waa waajib ah, sidaa darteed waa in aad sida ugu horreysa ee aad karto sida meelahan u muuqdaan in ay dhammaystiraan si deg deg ah.
Antwerp in Amsterdam tareenka
Lille si ay Tareenadu Amsterdam
Sida lagu Helo in Restaurant Week ee Netherlands ayaa
Inkasta oo ay jiraan fursado badan oo safarka si aad u hesho in ay dhacdo Amsterdam Restaurant Week, safarka tareenka waa mid ka mid ah siyaabaha ugu farxad iyo xiiso leh safarka. Waxay ka dhigaysa mid ah waayo-aragnimo oo dhan dheeraad ah oo xusuus leh sida safraan Europe, qaadashada in indhaha iyo imanaya aad caga gastronomic in style iyo raaxada.
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu fiican marka aad u safarto meel Yurub waa in aadan u baahan tahay inaad bedelan karto lacagta, oo dhan waa isku mid.
Dortmund inay Tareenadu Rotterdam
Hamburg si Tareenadu Rotterdam
Cologne si Tareenadu Rotterdam
Paris si Amsterdam tareen waa qiyaastii 3 saacadood iyo badh, halka Berlin si Amsterdam waa 6-saac safarka tareenka. Book hore iyo badbaadin on qiimaha tigidhada. Eeg taariikhaha for Restaurant Week 2019 ee Netherlands ayaa si aad awoodid leenahay kuraasta tareenka aad ka hor oo wuxuu ku raaxaysan kaydka weyn. Hel qiimaha ugu wanaagsan on safarka tareenka la Save A tareenka
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit ah la link a si post blog this, ama aad halkan riix: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/restaurant-week-netherlands/ - (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
#makhaayad #restaurantweek dalxiiska travelnetherlands traveltips
5 Cajiib Coffee Shops Near Tareen Stations In Italy